Wada-hawlgalayaasha Guusha Ardayda Waxbarashada Bartamaha Minestoa
Xarunta Partner for Student Success, waxaanu qof walba ku martiqaadaynaa inay gacanta taagan oo ay ku biiraan ganacsiyada, hay’adaha aan faa'iido doonka ahayn, dugsiyada iyo aragtileeyda ka soo jeeda bulsho weynta St. Cloud ee rumaysan in aynu wadaagno masuuliyada lagu caawinayo in dhalinyaradayadu guulaystaan. Haddii ay tahay guriga, dugsiga iyo nolosha. Waxay ka bilaabataa in ardayda dhanka waxbarashada laga diyaariyo oo ay deedna ku barbaaraan iyaga oo ah dad waa weeyn oo bulshada waxtar u leh, taas oo horseeda in bulshadu noqoto mid wanaagsan.
Maahmaah soo jireen ah ayaa odhanaysa, "In ilmo la koriyaa waxay u bahaan tahay awooda tuulo dhan." Anaguna taas baan aaminsanahay, hase yeeshee, waxaan sidoo kale rumaysanahay in ilmahaasi ay noqon doonaan kuwii iyaguna tuuladaas mustaqbalka daryeeli doona. Marka aan ka qayb qaadano in caruurtu guulaysato waxaynu maalgelinaynaa magaaladeena
Waxaan diirada saaraynaa gogol-dhigista xoojinta xirfadaha, oo ay ka mid yihiin xirfadaha tacliinta iyo farsamada; u soo-saarka shaqooyinka iyo khibradaha; barashada dareenka bulshada; iyo la shaqeynta bulshada.
Waxaan la shaqeynaa, isku hagaajinaa iskuna duwaynaa kheyraadka bulshada si loo dejiyo hadaf qeexan, loona qeexo mudnaanta iyo daboolida daloolada.
Waxaan abuuraynaa wacyi-galin iyo feejignaan dhanka PFSS iyo guusha ardayga ee bulshadeena.
Waxaan u doodnaa taageero dhanka dhaqaalaha iyo ilaha si ardaydu u guulaystaan.
Waxaan kormeernaa oo cabiraa horumarka laga gaarayo himilooyinka bulshada iyo mudnaanaha ugu horeeya.
Arday Diyaarsan... Qaangaadhka oo Taageeraya... Bulsho Heer sare ah
Si loo mideeyo bulsho weynta St. Cloud taas oo ku salaysan ka wada shaqaynta guusha ardayda.
Marka ardaydu ay guuleystaan, bulshada oo dhan way guuleysataa.
Arday kasta waa in lagu taageeraa gudaha iyo dibedda dugsigaba.
Waxbarashadu waxay ka kooban tahay wax ka badan fasalka caadiga ah.
Go'aamada la taaban karo waxay keenayaan natiijooyin wanaagsan.
Guusha ardayda oo idil waxaa lagu gaari karaa oo kaliya iyadoo la is kaashado, iskaa la isu xilqaamo iyo in ay cidkastaa si buuxda uga qayb qaadato.
Booqo 'Contact Us' bogga shaqaalahayaga
Ku xirnow bogga 'Our Goals (Himilooyinkeena)'
Ilmo kasta waxaa loo diyaarinayaa in uu noqdo arday noloshiisa oo dhan cilmiga jecel.
Arday kasta wuxuu ku guuleystaa dugsiga.
Arday kastaa wuxuu diyaar u yahay tababarka xirfadaha ama waxbarashada jaamacadaha.
Arday kastaa wuxuu diyaar u yahay xirfad.
CIDDA AAN ISKAASHANO
Guusha ardaygu way isbedeshay qarniga 21aad. Wanaaga ardayda laga filayaa kor bay u kacday, tartankuna wuu sii kordhay, dad badanna waxaa kordhay caqabadaha horyaalla. Saboolnimada, oo ah dabeecadda ugu caansan ee la xidhiidha horumar sameyn la’aan, ayaa iyaduna kor u kacaysa. Carruurta ku nool qoysaska saboolka ah ama dakhligoodu hooseeyo waxay u badan tahay in ay la kulmaan caqabado waxbarashada ku adkaynaya. Waxay galaan fasalka ugu koreeya ee xanaanada caruurta(kindergarten) iyagoo aan diyaarsanayn sida ilmaha kale, waxay haystaan fursado aad u yar oo ku saabsan barashada, waxayna u badan tahay in aysan ka qalin jabin dugsiga sare ama galaan jaamacad
Guusha ardaygu waa arrin bulshada u taalla. Waxay taabataa jinsiyad kasta, heer kasta oo dhaqaale, diin iyo dhaqan. Tani ma aha far isku fiiqid. Waxay ku saabsan tahay tilmaamidda waxa xalka ah. Anaga oo si wadajir ah ula shaqaynayna shuraakadayada/cidda aan is kaashano, iyo iyadoo aanu eegayno xogta macluumaadka, waxaanu taageeraynaa barnaamijyo abuuraya qorsheyaal cusub oo lagu guuleysto.
KUSOO BIIR HIMILADEENA
Partner for Student Success waxaa loo aasaasay inay ku meeleeyaan, isku xiraan isla markaana iskudaraan agabyada bulshada si ay u kordhiyaan fursadaha dhalinyarada oo idil si ay u daboolaan caqabadaha soo wajaha dhalinyarada da'da yar. Waxaanu ka shaqeynaa in aan taageerno ilmo kasta fasalka dhexdiisa iyo dibadiisaba, si loo caawiyo kobcinta niyadeed, tacliin iyo xirfad nololeed uu u baahanyahay si uu ugu guuleysto nolosha. Waxaanu taas ku guulaysan doonnaa iyadoo la isku xiriirinayo adeegyada ugu wanaagsan ee ay bulshadeenu bixiso si ilmo kastaa wanaagiisa u muujiyo.
Kooxda waxbarashada Xanaanada
Muhiimadda istaraatijiyadeed ee golaheenu waa inaan kordhino helitaanka daryeelka carruurta iyo tayada waxbarashada
iyada oo loo marayo ballaarinta ololaheena waxbarashada ee dhanka taageeridda waalidiinta, xanaaneeyayaasha, iyo bixiyeyaasha waxbarasho ee ilmanimada hore, doorka ay ka ciyaaraan iyo inay si buuxda u dhexgalaan barashada ilmanimada hore iyaga oo diiradda saaraya ilmaha oo dhan oo hela waxbarasho k-12.
Kooxaha qaabilsan U Diyaarsanaanta Xirfadaha iyo Jaamacada
Hadafka kooxdeena U Diyaarsanaanta Jaamacadu (Post-Secondary Readiness) waxay tahay in arday kastaa uu diyaar u yahay tababbar xirfad-shaqo ama jaamacad. Guddideenu waxay sii wadaan inay horumariyaan oo ay hirgeliyaan qorsheyaasha ay ku gaari karaan ujeeddada ah in arday kastaa u diyaargaroobo xirfad/jaamacad iyadoo la isticmaalayo kooxo kala duwan oo qaabilsan isku xidhka iyo isku duba ridka hay’ado kala duwan, iyo dadaalada socda iyo dadaalo ku saabsan ka wada shaqaynta Iskaashigan.
Communications and Program Improvement Manager pfss.communication@gmail.com
Download Somali translation PDF here.